တတွတ်တွတ်ဆဲဆိုအော်ငေါက် ဆုံးမတတ်တဲ့အဖေ နှင့်လဲ ခဏခဏ ဖုန်းဆက်ပေးပါ – Tameelay
တတွတ်တွတ်ဆဲဆိုအော်ငေါက် ဆုံးမတတ်တဲ့အဖေ နှင့်လဲ ခဏခဏ ဖုန်းဆက်ပေးပါ
သားဂျီး ဟျောင့် မင်းအိမ်က ဖုန်းလာနေတယ်´
`မင်း ကိုင်လိုက်ကွာ အမေဆိုပြောမယ်
`အေး အေး ပေး´
အားမရှိတဲ့ အမေအသံက အရမ်းသိသာလွန်နေတယ်
`အမေ ကနေကောင်းပါတယ် မင်းအဖေကတော့
မနက်က ဆုံးပီသားးးး ….. ´
`သား ဒီနေ့ပြန်လာခဲ့ ရောက်မှပဲအမေ
ဆိုပီး အမေဖုန်းချသွား ပင်မဲ့
နောင်တတွေကို မျက်ရည်တွေနဲ့ရောပီး ။
လမ်းထိပ်က pco ကို ဖုန်းဆက်တိုင်း
အပြေးလာကိုင်တဲ့ မောနေတဲ့ အဖေအသံကိုမှ
ပြောမိတယ် ကျွန်တော် ….
`အဖေ နေကောင်းလားလို့´ မေးခွင့် မရတော့ဘူး။
စက်ဘီးလေးတွန်းပီး ပြန်လာတာမြင်တော့ ဘယ်လိုရှာခဲ့လဲ တစ်ခွန်း မမေးမိပဲ
မေမေကိုပဲ ဖက်ပီးပျော်ခဲ့တဲ့ ကျွန်တော် ….
`ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဖေဖေ´ လို့ပြောခွင့် မရတော့ဘူး။
မိဘ ဆရာ ကတော့ပွဲအတွက်
ညစ်ပတ်နေတဲ့ ဖေဖေကို မခေါ်ချင်တာနဲ့
မေမေပါရင် ရတယ်လို့ လိမ်ခဲ့တုန်းက
ပြုံးပြုံးကြီး ကြည့်နေခဲ့တဲ့ ဖေဖေ ….
`ဖေဖေမကြိုက်ဖူး င့သားစား´လို့ ပြောတုန်းက
မသိသလို နေခဲ့တဲ့ ကျွန်တော် ….
`မရဘူးကွာ ဖေဖေလည်းစား´လို့ပြောခွင့် မရတော့ဘူး။
`ငါသား အချောကွ´ ဆိုပီးကနေတဲ့ ဖေဖေ
မေမေ ပြောပြတယ် ဆိုပင်မဲ့
မျက်လုံးထဲက ဖျောက်မရဘူး မနေ့ကလိုပဲ …။
တစ်ရက်လောက်လေးပဲ ဖေဖေ ပြန်လာခဲ့ပေး
လို့ အော်ပြောလိုက်တယ် ………
ခပ်ဆိုးဆိုး ဂျစ်ပစီတစ်ယောက် …….
`သားဂြီး ဟြောငျ့ မငျးအိမျက ဖုနျးလာနတေယျ´
`မငျး ကိုငျလိုကျကှာ အမဆေိုပွောမယျ
`အေး အေး ပေး´
အားမရှိတဲ့ အမအေသံက အရမျးသိသာလှနျနတေယျ
`အမေ ကနကေောငျးပါတယျ မငျးအဖကေတော့
မနကျက ဆုံးပီသားးးး ….. ´
`သား ဒီနပွေ့နျလာခဲ့ ရောကျမှပဲအမေ
ဆိုပီး အမဖေုနျးခသြှား ပငျမဲ့
နောငျတတှကေို မကျြရညျတှနေဲ့ရောပီး ။
လမျးထိပျက pco ကို ဖုနျးဆကျတိုငျး
အပွေးလာကိုငျတဲ့ မောနတေဲ့ အဖအေသံကိုမှ
ပွောမိတယျ ကြှနျတျော ….
`အဖေ နကေောငျးလားလို့´ မေးခှငျ့ မရတော့ဘူး။
စကျဘီးလေးတှနျးပီး ပွနျလာတာမွငျတော့ ဘယျလိုရှာခဲ့လဲ တဈခှနျး မမေးမိပဲ
မမေကေိုပဲ ဖကျပီးပြျောခဲ့တဲ့ ကြှနျတျော ….
`ကြေးဇူးတငျပါတယျ ဖဖေေ´ လို့ပွောခှငျ့ မရတော့ဘူး။
မိဘ ဆရာ ကတော့ပှဲအတှကျ
ညဈပတျနတေဲ့ ဖဖေကေို မချေါခငျြတာနဲ့
မမေပေါရငျ ရတယျလို့ လိမျခဲ့တုနျးက
ပွုံးပွုံးကွီး ကွညျ့နခေဲ့တဲ့ ဖဖေေ ….
`ဖဖေမေကွိုကျဖူး င့သားစား´လို့ ပွောတုနျးက
မသိသလို နခေဲ့တဲ့ ကြှနျတျော ….
`မရဘူးကှာ ဖဖေလေညျးစား´လို့ပွောခှငျ့ မရတော့ဘူး။
`ငါသား အခြောကှ´ ဆိုပီးကနတေဲ့ ဖဖေေ
မမေေ ပွောပွတယျ ဆိုပငျမဲ့
မကျြလုံးထဲက ဖြောကျမရဘူး မနကေ့လိုပဲ …။
တဈရကျလောကျလေးပဲ ဖဖေေ ပွနျလာခဲ့ပေး
လို့ အျောပွောလိုကျတယျ ………
ခပျဆိုးဆိုး ဂဈြပစီတဈယောကျ …….
ဒီလိုကျောင်းသားလေးတွေ သိစေချင်လွန်းလို့ Share ပေးကြပါနော်…။
မိဘ​တွေက သားသမီး​တွေကို ပညာတတ်​ကြီးဖြစ်​​အောင်​ဘဝ​တွေလှပ​အောင်​ လူ​အောက်​မကျ​အောင်​ အသက်​​မွေး​ကြောင်း ပညာတတ်​တစ်​ခုရ​အောင်​ ကိုယ့်​အားကိုကိုယ်​တတ်​​အောင်​ မရှိတဲ့ကြားက​ ​ငွေ​ကြေးကုန်​ကျခံပြီးကျောင်းထား​ပေးကြတယ်​။ တစ်​ချို့မိဘ​တွေကျ စီးပွား​ရေအဆင်​မ​ပြေတဲ့ကြားက အဆင်​​​ပြေ​အောင်​လုပ်​ပြီးထားကြတယ်​ တစ်​ချို့မိဘ​တွေဟာ ​ငွေ​ကြေးရှိလို့​ ​​ပေါလို့ များလို့ ကျောင်းထား​ပေးကြတာမဟုတ်​ပါဘူး ဒီ​တော့ သားသမီး​တွေကသိသင့်​သိထိုက်​တဲ့အချက်​​လေးက ဘာ​တွေလဲ ဆိုရင်​ ၁။​ကျောင်းထား​ပေးတာ ပညာရှာ​ဖို့ ရည်​စားရှာဖို့မဟုတ်​ဘူး။ ၂။​ကျောင်းထား​ပေးတာ …
ဦးဇင်းသာဝ အလိမ်ခံရပြီး လူထွက်လိုက်ရတဲ့ဖြစ်ရက်
တချိန်က…လင်မယားနှစ်ယောက်ရှိတယ်တဲ့ ။ ကိုသာဝ ဆိုသူက နေ့စဉ်လိုလို မူးမူးပြီး မိန်းမနှင့် မကြာခဏ ရန်ဖြစ်စကားများကြတတ်တယ် တဲ့။ မိန်းမဖြစ်သူက အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းရှာပြီး ဘုန်းကြီးကျောင်းသို့ သင်္ကန်းသွားဝတ်ပါရန် တိုက်တွန်းလိုက်တယ်တဲ့။ တစ်နေ့တော့ ကိုသာဝ က သင်္ကန်းဝတ်ဖြစ်သွားတယ် တစ်ပတ်လောက်ကြာသော် ဦးဇင်းသာဝ က လူဘ၀နှင့်ဦးဇင်းဘ၀ကို စဉ်းစားတယ်။ “အင်း …
သင့်မှာ ရန်သူတွေရှိနေတာ ကျေးဇူးတင်စရာကောင်းပါတယ်
သင့်မှာ ရန်သူတွေရှိနေတာ ကျေးဇူးတင်စရာကောင်းပါတယ် သူတို့ကြောင့် သင့်ကိုချစ်ခင်သူတွေကို ပိုတန်ဖိုးထားတတ်လာလို့ ။ သင့်ကို မနာလိုသူတွေရှိနေတာ ကျေးဇူးတင်စရာကောင်းပါတယ် သူတို့ကြောင့် သင့်ကို အားကျသူတွေကို ပိုဂရုစိုက်လာတတ်လို့ ။ သင့်ကို စွန့်လွှတ်သူတွေရှိနေတာ ကျေးဇူးတင်စရာကောင်းပါတယ် သူတို့ကြောင့် သင့်ကို မစွန့်လွှတ်နိုင်တဲ့သူတွေကို ပိုင်ဆိုင်လာရလို့ ။ သင့်ကို ချောက်တွန်းတဲ့လူတွေရှိနေတာ …